Shiinaha Bonovo cusub oo loo qaabeeyey oo leh qalab kala-jabis dhagax-jabis ah 2 illaa 85 tan oo ah warshad wax lagu rito iyo alaab-qeybiyeyaal | Bonovo
Bonovo Rock Ripper wuxuu furi karaa dhagaxa cimilada, tundra, carrada adag, dhagaxa jilicsan
iyo lakabka dhagaxa dillaacay. waxay fududeysaa qodista carrada adag
wax soo saar leh. Rock Ripper waa lifaaq kaamil ah oo lagu dhex gooyo dhagaxa adag ee deegaankaaga shaqada.
Bonovo Rock ripper oo leh nashqad qaabeyn ah ayaa ka soo dhex bixi kara oo ka soo bixi kara
sagxadaha ugu adag fudaydka u oggolaanaya in si fiican loo jeexjeexo noocyo kala duwan oo ka mid ah
Naqshadeynta ayaa xaqiijin doonta adiga
shanka ayaa jeexjeexa maaddada halkii aad ka jeexi laheyd. Qaab duuban ayaa sameyn kara
kor u jeexjeexa waxtarka leh taas oo macnaheedu yahay inaad si fudud oo qoto dheer uga dhigi karto jeexjeex
adigoon culeys badan saarin mashiinka.
Alaabta Model Tonnes Miisaanka Biin
Qashin qubka BR-60 1-10T 400-500kg 50-65mm
Dhagaxa weyn ee Bonovo waxaa si gaar ah loogu farsameeyay inuu horay u jeexjeexo dhulka barafoobay, laamiga, ama carrada kale ee adag ee dhaaftay waajibaadka baaldi lagula taliyay. Lifaaqan aadka isugu dhejisan ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in laga saaro jiridda, xididdada, ama dib-u-baarka. Qaabka hal ilig ee Ripper-ku wuxuu ku habboon yahay gelitaanka deegaanno kala duwan oo adag.
Dhagaxyada dhagxaanta ayaa gooyn kara qarka dhagaxa, permafrost, ama waxkasta oo aad ku tuurtid.
• Dhagaxa dhagaxa
• Carro dhagax ah
• Saaridda jiridda
Hore: GUDDOOM AH & BOOM
Xiga: BONOVO si madax-bannaan ayaa loo naqshadeeyay loona soo saaray baaldi baaritaanka wareega ah oo ku habboon qodayaasha 1-50t
dhabarka ripper dhabarka
ripper buluug ah
qodista dhaxan qoda
ilig jeex jeex jeex jeexan oo iib ah
ilkaha dhaxan ee qodista
ilig dhaxan u qodista mini
jeex jeex jeex iliga
Ripper Haydarooliga ee qodista
lifaaq fiiq jeexjeexa mini
farta fiiq jeexjeexa yar
mashiinka wax lagu qodaa ee bisadda 301
jeex jeex jeex jeex mini
jeexjeexa jirida yar
gaari yar oo ripper ah
hal ripper godka
Qodista baaldi ripper ah
baaldi ripper for qodista
farta fiiq-jeex jeexjeex mini
Ripper bisad 301
ripper for qodista
ganacsade ripper para
ripper shank for qodista
ilig ripper bisad d11
ilig fiiqan oo loogu talagalay qodista yaryar
ripper xididka for excavator mini
BONOVO qumman qumman coupler deg deg ah oo dhan e ...
Naqshadeynta naqshadeynta calaamadda BONOVO ee farsamada farsamada leh ISO9 ...
BONOVO habeysan karo Haydarooliga la taaban karo pulveriz ...